Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0612 zom
Zoma 10 Aog.
“Nandritra ny nipetrahan’i Paoly tany Korinto, dia nahafaly dia nahafaly azy tokoa ny fahatongavan’i Silasy sy Timoty avy tany Makedonia. Nitondra ‘vaovao mahafaly’ ny amin’ny ‘finoana sy ny fitiavan’ireo izay nanaiky ny fahamarinana tamin’ny voalohany nataon’ireo mpitondra hafatry ny filazantsara tany Tesalônika izy ireo. Naneho fitiavana sy firaisam-po tamin’ireo mpino, izay nijanona ho mahatoky tamin’ny fahamarinana teo anivon’ny fitsapana sy ny fahoriana i Paoly.” — VM, t. 223.
“Ny fitiavana marina dia teraka avy any an-danitra, tsy tia tena ary tsy azo ovana. Tsy miankina amin’ny fandokafana ataon’ny olombelona izy. Ny fon’izay mandray ny fahasoavan’ny lanitra dia ho feno fitiavana an’Andriamanitra sy an’ireo nanoloran’i Kristy ny ainy. Tsy miady hahazo fankasitrahana ho an’ny tenany izy. Tsy tia ny hafa izy satria tia azy sy mahafinaritra azy izy ireo ary mankasitraka ny toetra mendrika ananany, fa satria kosa fananan’i Kristy efa novidiny ireny. Raha diso ny fandraisana na fanehoana ny olona ny anton-javatra manosika azy, na ny teniny na ny fihetsiny dia tsy manafintohina azy izany, fa tohizany toy ny teo ihany ny diany. Malemy fanahy sy malina izy, manetry tena izy momba ny fiheverany ny tenany, nefa dia feno fanantenana, matoky mandrakariva ny famindrampo sy ny fitiavan’Andriamanitra.” — HF, t. 75.
• Ao amin’ny Henoinareo ny Fanoharana (etsy ambony), sy ao amin’ny boky maro hafa nosoratany, dia ampiasain’i Ellen White ny teny hoe “fanahy izay nanoloran’i Kristy ny ainy.” Hatraiza no tokony ho fivelaran’ny fampiharana izany teny fiantsoana izany? Amin’ny olombelona rehetra eto ambonin’ny tany ve? Sa amin’ireo mpino an’i Kristy ihany? Raha tena maty ho an’ny olona rehetra i Kristy, dia nahoana no tsy ny olona rehetra no voavonjy?
• Inona no mahazava-dehibe ny fifandraisana efa misy mialoha rehefa ilaina ny hanomezana torohevitra na hananarana ny mpiara-miangona iray? Inona no azontsika ianarana momba izany avy amin’ny ohatra nasehon’i Paoly hita ao amin’ny lesona tamin’ity herinandro ity? Inona no azontsika ianarana avy amin’izany izay afaka hanampy antsika eo amin’ny asa fanompoana ataontsika ho an’ny hafa?
• Niharihary tokoa ny fitiavan’i Paoly sy ny fitsinjovany ireo mpino tany Tesalônika. Izany fitiavana izany dia taratry ny fitiavana izay nasehon’i Jesôsy fony Izy nonina tetỳ an-tany tao amin’ny nofo. Ny fitiavana dia tena manan-kery lehibe eo amin’ny fanalefahana ny fo sy ny fanomanana ny olona handray ny fahasoavan’Andriamanitra. Ahoana no hianarantsika hitia ny hafa mihoatra noho izay efa ataontsika ankehitriny? Ahoana no hianarantsika maneho fitiavana amin’ny fomba tsaratsara kokoa?
Famintinana : Soritan’i Paoly ao amin’ny 1 Tes. 2:13–-3:13 ny fihetseham-pony sy ireo toe-javatra nitranga teo anelanelan’ny fotoana nahavoatery azy handao an’i Tesalônika sy ny nahatongavan’i Timoty tany Kôrinto nitondra vaovao momba ny fiangonana. Ny fifamatorana lalina nisy teo amin’i Paoly sy ireo mpino tesalônianina no votoatin’io toko io.